ထူးထူးဆန်းဆန်း ရွေ့လျားနေသော ကျောက်တုံးများ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, September 07, 2010 Tuesday, September 07, 2010 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ , သုတအဖြာဖြာ
Death Velly National Park
Death Velly Desert
Death Velly National Park ဟာ အမေရိကား ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ရှိပြီး အပူပြင်းဆုံးနဲ့ အခြောက်သွေ့ဆုံး၊ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်ထက် အနိမ့်ဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. ဧက ၃သန်းကျော် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ကန္တာရကြီးတစ်ခုလည်း ရှိနေပြီး သူရဲ့ဘေးမှာတော့ ပေပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ခန့် မြင့်ပြီး နှင်းဖုံးနေတဲ့ တောင်ထွတ်တွေ၊ အရောင်စုံကျောက်လွှာတွေ ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေ ၀ိုင်းရံနေပါတယ်.. အဲဒီ Death Velly National Park ဟာ ခရီးလမ်းပန်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ နေရာမှာ ရှိပေမဲ့လို့ တစ်နှစ်မှာ လူဦးရေ ၇သိန်းကျော်ခန့် သွားရောက်ကြပြီး သဘာဝရှုခင်းများ၊ ပထ၀ီဝင် မြေပြင်အနေအထား ပြောင်းလဲလာပုံများ ၊ ရှေးခေတ်ကျောက်လွှာများနဲ့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ၊ သစ်ပင်များ၊ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ကန္တာရရှုခင်းများ၊ ညရှုခင်းများကို လေ့လာကြည့်ရှုဖို့နဲ့ တောင်တက်ဖို့ သွားရောက်တတ်ကြပါတယ်.. ရွှေရှာကြသူများဟာ ၄င်းဒေသကို ဖြတ်သန်းချိန်မှာ လူပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် Death Velly ရယ်လို့ နံမည် တွင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီ Death Velly National Park မှာ ရှိတဲ့ Racetrack Playa ကွင်းပြင်ကတော့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကောင်းအောင် ရွေ့လျားနေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကြောင့် ပိုပြီး လူသိများ ထင်ရှားလာပါတယ်.. ရွေ့လျားနေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေအကြောင်းကို အောက်မှာ ဓာတ်ပုံများနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Death Velly မှာ ရှိနေတဲ့ Racetrack Playa ကွင်းပြင်ကြီးဟာ တောင်တန်းတွေ အထပ်ထပ် ၀ိုင်းရံနေတဲ့ကြားက သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကွင်းပြင်ဖြစ်ပြီး သာမာန်အချိန်မှာ ကွင်းပြင်ဟာ ရေထုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ရေကန်အဖြစ် မြင်တွေ့ရပါတယ်.. နွေရာသီမှာ Racetrack Playa ကွင်းပြင်က ရေတွေခမ်းခြောက်လို့ ရွံနွံတွေဟာ အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဆောင်းရာသီမှာတော့ ရေတွေခဲနေတတ်ပါတယ်.. ရေတွေ ခမ်းခြောက်သွားချိန်မှာတော့ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက် မ နိုင်တဲ့ အရွယ်အစား (သို့မဟုတ်) အဲဒီအရွယ်အစားထက် အနည်းငယ်ကြီးတဲ့ အနေအထားရှိ ကျောက်တုံးတွေဟာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရွံမြေပြင်ပေါ်မှာ နေရာရွေ့သွားလာနေတဲ့ စွပ်ကြောင်းတွေကို တွေ့ရှိရပါတော့တယ်.. ဒီကျောက်တုံးတွေ ရွေ့လျားနေတဲ့အကြောင်းအရာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူတိုင်းအတွက် ပဟေဠိသဖွယ် ဖြစ်နေကြပါတယ်.. အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ လူ့စွမ်းအား၊ လူ့ပယောဂကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သူ့သဘာဝအတိုင်း အလိုလို နေရာရွေ့နေကြပြီး ၄င်း Racetrack Playa ဒေသဟာ ရာသီဥတု ကောင်းမွန်တဲ့ နွေရာသီလို အချိန်မှာတောင် ခရီးလမ်းပန်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာကြောင့် လူပြတ်လွန်းတဲ့ ဒေသလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. သွားလာဖို့ ခက်ခဲသော်လည်း များစွာသော ဘူမိဗေဒပညာရှင်များဟာ ထိုနေရာကို စွန့်စားသွားရောက်ကာ ထူးဆန်းလှတဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့လျားတဲ့အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာစုံစမ်းကြပါတယ်.. ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ယူခဲ့ကြပါတယ်.. ထိုနေရာဟာ ဆောင်းရာသီလို ရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီး နှင်းမုန်တိုင်းတွေ အချိန်မရွေး တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာတော့ ဘယ်သူမှ သွားရောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတဲ့ Racetrack Playa မှာ ရေတွေခမ်းပြီး ရွံ့ပြင်ကြီးလည်း တဖြေးဖြေး ခြောက်သွေ့ သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ အက်ကွဲကြောင်းတွေ ဖြစ်နေပြီး ညီညာပြန့်ပြူးနေတဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာ ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့လျားရာကနေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို အထင်အရှား တွေ့ရနိုင်ပါတယ်.. အချို့ ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များကတော့ ၄င်းဖြစ်ရပ်ဟာ မြေပြင်ပေါ်က ရွံ့တွေ မခြောက်သွေ့ခင် စိုစွတ်နေဆဲအချိန်မှာ ကျောက်တုံးပေါ်မှာ တင်ကျန်နေဆဲ ရေခဲပြင် ခပ်ပါးပါးကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ လေတိုက်ခတ်ချိန်မှာ နေရာမှ တစ်ရွေ့ရွေ့ ရွေ့စေနိုင်တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချကြပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ဒီယူဆချက်ဟာ လုံးဝမှန်ကန်တယ်လို့ မပြောနိုင်လောက်အောင်ဘဲ ရွံပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ ကျောက်တုံးတွေအားလုံး ခြောက်သွေ့သွားပြီး ပက်ကြားအက်ထနေအောင် အပူချိန် မြင့်မားနေတဲ့ နွေရာသီလို အချိန်မျိုးမှာတောင် ကျောက်တုံးတွေဟာ ထူးဆန်းစွာ ရွေ့လျားနေတတ်ကြပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ခြောက်သွေ့ ညီညာနေတဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာ နေရာရွေ့နေကြရုံမျှမက ကျောက်တုံး ရွေ့လျားတဲ့ လမ်းကြောင်းရာတွေ ခပ်နက်နက်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပါ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် တွေ့ရပါတယ်.. ကွင်းပြင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကတော့ အနီးအနား ကျောက်တောင်တွေကနေ ပဲ့ကျ လိမ့်ဆင်းကျလာတတ်တဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်.။ ဘေးဝန်းကျင်က တောင်များမှာ အများအားဖြင့် ဒိုလိုမိုက်ကျောက် အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Racetrack Playa မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့လျားနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ လူသားတွေရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ဆင်ခြင်ကြံဆမှုတွေကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု အဖြစ် ထင်ရှားလာနေပါတယ်.. ဒီကိစ္စကို အတိအကျ အဖြေထုတ်နိုင်ဖို့တော့ ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုက ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့လျားရာ လမ်းကြောင်းအားလုံးဟာ မျဉ်းပြိုင်အနေအထားအတိုင်း ရွေ့နေကြခြင်းပါဘဲ.. နှစ်စဉ်လေ့လာချက်များအရ ကျောက်တုံးတွေဟာ ကိုယ်စီလမ်းကြောင်းအတိုင်း ရွေ့လျားနေတတ်ပြီး အချို့ကျောက်တုံးများရဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ အဖြောင့်အတိုင်း ရှိနေသော်လည်း အချို့ကျောက်တုံးတွေရဲ့ ရွေ့လျားရာလမ်းကြောင်းမှာ အဖြောင့် သဏ္ဍာန်မှ ရုတ်တရက် ချိုးကွေ့သွားပြီး၊ အချို့မှာ အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းကောက်ကွေ့တဲ့ လမ်းကြောင်းမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. ကျောက်တုံးတွေရဲ့ ရွေ့လျားရာ လမ်းကြောင်းတွေကို အထင်အရှားမြင်နိုင်ကြပေမဲ့လို့ ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့နေတာကိုတော့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဘယ်သူကမှ မမြင်ဖူးကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်.. ဘယ်အချိန်မှာ ကျောက်တုံးတွေရွေ့တယ်.. (Speed) အရှိန်ဘယ်လောက်နဲ့ ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူကမှ အတိအကျ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ အချို့ကျောက်တုံးများဟာ ပေါင်ချိန်အနည်းငယ်သာ လေးသော်လည်း အချို့သော ကျောက်တုံးကြီးများမှာ ပေါင် ၇၀၀ခန့်ပင် ရှိတတ်ပြီး အချို့ကျောက်တုံးများမှာ ပေအနည်းငယ်ခန့်သာ ရွေ့လျားကြသော်လည်း အချို့မှာတော့ ကိုက်ပေါင်းများစွာ ကွာဝေးအောင် ရွေ့လျားထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မြေပြင်ပေါ်မှ ထင်ရှားနေတဲ့ ရွေ့လျားကြောင်းများ
အဲဒီ Death Velly က Racetrack Playa ဒေသတစ်ပိုက်ဟာ လူနေအိမ်ခြေလဲမရှိ၊ ခရီးလမ်းပန်းလည်း ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းလွန်းပါတယ်.. ဒီလောက် လူသူမနီး၊ အစွန်အဖျားကျပြီး လမ်းဆိုး၊ ရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုမှာ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ကျောက်တုံးတွေ ရွေ့နေတဲ့အကြောင်းဟာ ခုချိန်ထိတော့ အဖြေအတိအကျထုတ်ဖို့ ခက်ခဲနေသေးတဲ့ ပဟေဠိတစ်ပုဒ် အနေနဲ့သာ ရှိနေသေးကြောင်းနဲ့ ဒီသတင်းလေးကို ဖတ်မိပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့ချိန်မှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဝင်စားမိတာကြောင့် အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းကာ စာဖတ်သူများ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပြန်လည် ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ Google Earth မှာလည်း Racetrack Playa လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာမယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာဒေသရဲ့ တည်နေရာအနေအထားနဲ့ ရွေ့နေတဲ့ ကျောက်တုံးများရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုလို့ ရပါကြောင်း တင်ပြရင်းနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို နိဂုံးချုပ်ပါတယ်ရှင်။
Photos and Sources: http://virtual.yosemite.cc.ca.us/ghayes/Racetrack%20Playa.htm
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, September 05, 2010 Sunday, September 05, 2010 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
တက်စ်ဟာ အသက်၈နှစ်အရွယ် ချစ်စရာကလေးမလေး တစ်ဦးပေါ့။ တစ်နေ့မှာ သူ့အဖေနဲ့ အမေ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆေးကုသခံနေရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူမောင်ငယ်လေး အင်ဒရူးအကြောင်း တီးတိုးတိုင်ပင် ပြောဆိုနေတာကို အမှတ်မထင် ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အခုသူကြားလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာက သူမရဲ့ အဖေနဲ့ အမေတို့မှာ စုဆောင်းထားသမျှ ပိုက်ဆံလဲ ကုန်ပြီဖြစ်လို့ အင်ဒရူးလေးရဲ့ ဆေးကုသစရိတ်အတွက် ဆရာဝန်ကို ပေးချေဖို့ အခုနေတဲ့ အိမ်ကို နောက်လထဲမှာ ရောင်းချပြီး အခြား ဈေးသက်သာတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းရွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ကို ပိုက်ဆံချေးငှားမဲ့သူလည်း ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ အတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှု လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်တော့ကြောင်း၊ ဈေးသက်သာတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့သာ ကလေးကို ဆက်ပြီး ကုသနိုင်တော့မဲ့ အခြေအနေအကြောင်း ပြောဆိုနေကြတာပါ။ သူ့အဖေက မျက်ရည်တွေပြည့်လျှံနေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ နားထောင်နေရှာတဲ့ သူ့အမေကို တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တာက “တန်ခိုးရှင် တစ်ပါးပါးကသာ သူတို့ သားလေးကို ကယ်တင်နိုင်တော့မယ် ထင်ပါတယ် ” ဆိုတဲ့ စကားလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်...။
သူ့အဖေနဲ့အမေစကားကို ကြားရတဲ့ တက်စ်လေးဟာ ခေတ္တမျှ စဉ်းစားနေပြီး ရုတ်တရက် သတိရလာဟန်နဲ့ သူမရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်သွားပြီး ဘီဒိုထဲ သိမ်းထားတဲ့ ဖန်ပုလင်းလေးတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လာပါတယ်။ ဖန်ပုလင်းလေးထဲမှာတော့ သူရတဲ့မုန့်ဖိုးလေးတွေ စုထားတဲ့ ငွေအကြွေစေ့လေးတွေ ရှိနေပါတယ်.. အဲဒီငွေအကြွေ အားလုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် သွန်ချလိုက်ပြီး တစ်စေ့စီဂရုတစိုက် ကောက်ယူကာ ရေတွက်ပါတော့တယ်.. သုံးကြိမ်သုံးခါတိတိ သူမရဲ့ အကြွေစေ့လေးတွေကို မမှားရအောင် ပြန်ရေတွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ငွေဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူ သေချာသွားခဲ့ပါပြီ. ဒါနဲ့ တက်စ်လေးဟာ အကြွေစေ့တွေကို ဖန်ပုလင်းလေးထဲ သေချာပြန်ထည့်လိုက်ပြီး အဖုံးလေးကို ဂရုတစိုက် ပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ သူမရဲ့ အင်္ကျီအိတ်လေးထဲကို ပုလင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပြီး အိမ်ရဲ့ နောက်ဖေးတံခါးလေးကို တိတ်တိတ်လေးဖွင့်ကာ သူမတို့အိမ်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဆေးဆိုင်လေးဆီကို သုတ်ခြေတင်ပြီး ပြေးပါတော့တယ်။
ဆေးဆိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဆေးဆိုင်မှာ လူတစ်ယောက်တည်းရှိနေခဲ့ပြီး အဲဒီလူက ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံလဲ ရပါတယ်.. ပြီးတော့ သူ့ကြည့်ရတာ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်.. သူမ ဆိုင်ရှေ့ရောက်နေတာကို မြင်တွေ့ပုံမရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အာရုံ သူမဆီ ရောက်လာဖို့အတွက် တက်စ်လေးဟာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်.. အတော်ကြာ စောင့်နေပေမဲ့ ဆိုင်ရှင်က သူမကို သတိမပြုမိသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ တက်စ်က ဆိုင်ရှင်သတိပြုမိအောင် သူမရဲ့ ခြေထောက်က ဖိနပ်တွေကို အသံမြည်အောင် ကြမ်းပြင်နဲ့ ပွတ်တိုက်လိုက်ပါတယ်.. ဒါလည်း ဆိုင်ရှင်က မတွေ့ပါဘူး။ တစ်ခါ သူမရဲ့ကလေးအသံလေးနဲ့ ကြိုးစားပြီး ချောင်းဟန့်တဲ့ အသံပြုလုပ်ပြန်ပါတယ်… အရာမထင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သူမလေးရဲ့ အင်္ကျီအိတ်ထဲက ဖန်ပုလင်းလေးကို ထုတ်လိုက်ပြီး ဆေးတွေထည့်ထားတဲ့ မှန်ကောင်တာကို အသံမြည်အောင် ခေါက်လိုက်ပါတော့တယ်… ဒီတော့မှ ဆိုင်ရှင်က သူမကို သတိပြုမိပြီး “ဘာလိုချင်သလဲ” လို့ ခပ်ဆတ်ဆတ် လေသံနဲ့ လှမ်းမေးပါတယ်.. ကြည့်ရတာ တက်စ်ဟာ သူ့အတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်သွားခဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
တက်စ်ရဲ့ အဖြေကို မစောင့်ဘဲ ဆိုင်ရှင်က တစ်ဆက်တည်း ပြောလိုက်တာက “ငါက ချီကာကိုက ရောက်လာတဲ့ ငါ့အစ်ကိုနဲ့ စကားပြောနေတာ.. သူနဲ့ ငါက မတွေ့ရတာ ငါ့တစ်သက်တောင် ရှိတော့မယ်..” လို့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တဲ့ လေသံနဲ့ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ တက်စ်လေးကလည်း “အိုး သမီးလည်း သမီးရဲ့ မောင်လေးအကြောင်း ပြောပြချင်သေးတယ်.. သူက အခု အရမ်းကို နေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်... တကယ့်ကို နေမကောင်းတာပါ။ သမီးကို သမီးမောင်လေးအတွက် တန်ခိုးရှင် ရောင်းပါ” လို့ တက်စ်က ပြောလိုက်ပါတယ်.. သူမရဲ့ စကားကို နားရှုပ်ထွေးသွားပုံရတဲ့ ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က “ဘာပြောလိုက်တာလဲ” လို့ ထပ်မေးပါတယ်.. ဒီတော့ တက်စ်လေးက “ သမီးမောင်လေးနံမည်က အင်ဒရူးလို့ ခေါ်ပါတယ်.. ဆရာဝန်တွေက သူရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တစ်ခုခု ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်.. ဆေးကုနေတာလဲ ကြာပြီ မသက်သာသေးပါဘူး.. ဖေဖေပြောတာတော့ တန်ခိုးရှင်က ကယ်မှဘဲ အင်ဒရူုးရဲ့ ရောဂါက သက်သာတော့မယ် ပြောပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဒီဆေးဆိုင်မှာ တန်ခိုးရှင်ကို လာဝယ်တာပါ။ ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပါသလဲ” လို့ ပြန်ပြောပြန်ပါတယ်။ “အိုး ငါတို့ဆိုင်မှာ တန်ခိုးရှင်ဆိုတာ မရောင်းပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပါတယ် ကောင်မလေးရယ်.. မင်းကို မကူညီနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး” လို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်.. တက်စ်လေးဟာ မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီး အသံတုန်တုန်လေးနဲ့ “ အိုး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးရယ် သမီးဆီမှာ အဲဒီတန်ခိုးရှင်ကို ၀ယ်ဖို့ ပိုက်ဆံပါပါတယ်.. အခုပါတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မလောက်သေးဘူးဆိုရင် သမီးအိမ်ပြန်ပြီး ပိုက်ဆံသွားထပ်ယူပါ့မယ်... သမီးကို တန်ခိုးရှင်ဆိုတဲ့ဆေး ရောင်းဖြစ်အောင် ရောင်းပေးပါနော်.. ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတာ သမီးကို ပြောပါ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးရယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူတို့၂ယောက်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားထားကာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ဆေးရောင်းသူရဲ့ အစ်ကို ဆိုသူက “သမီးရဲ့ မောင်လေးအတွက် ဘယ်လိုတန်ခိုးရှင်မျိုး လိုအပ်နေတာလဲ” လို့ ကြင်နာတဲ့ အသံနဲ့ လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်.. “ဟင့်အင်း သမီးမသိဘူး အန်ကယ်.. သမီးသိတာက မောင်လေးဟာ အသည်းအသန် နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါဘဲ.. မေမေကတော့ မောင်လေးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှု လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သမီးတို့ ဖေဖေမှာလည်း ပိုက်ဆံက မရှိတော့ဘူး.. ဒါကြောင့် သမီးစုထားတဲ့ ပိုက်ဆံကလေးတွေနဲ့ တန်ခိုးရှင် ဆိုတာကို လာဝယ်တာပါ” လို့ တက်စ်လေးက စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်. “ကဲ.. ဒီလိုဆိုရင် သမီးဆီမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိလဲ.. ” ထိုလူကြီးက ပြန်မေးတော့ တက်စ်က “သမီးဆီမှာ စုစုပေါင်း တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဆယ့်တစ်ဆင့် ရှိပါတယ်.. ဒါ သမီးမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံအကုန်ပါဘဲ.. ဒါပေမဲ့ တန်ခိုးရှင်ကို ၀ယ်ဖို့ပိုက်ဆံ မလောက်သေးဘူးဆိုရင် သမီး အိမ်ပြန်ပြီးပိုက်ဆံထပ်ယူပါ့မယ်” လို့ ထိုလူကြားလောက်ရုံမျှ အသံလေးနဲ့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ထိုလူကြီးက ပြုံးလိုက်ပြီး “အိုး ဘယ်တောင် အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလဲ.. တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဆယ့်တစ်ဆင့်ဆိုရင် သမီးမောင်လေးအတွက် တန်ခိုးရှင်ကို ၀ယ်ဖို့ ကွက်တိပါဘဲ… ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး” လို့ ကလေးမလေးကို ပြန်ပြောလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ပိုက်ဆံအကြွေတွေကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ကလေးမလေးရဲ့ အေးစက်နေတဲ့ လက်ဖျားလေးကို ကြင်နာယုယစွာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ “သမီးတို့နေတဲ့နေရာကို အန်ကယ့်ကိုခေါ်သွားနော်.. အန်ကယ်သမီးရဲ့ မောင်လေးကို လိုက်ကြည့်မယ်.. ပြီးတော့ သမီးရဲ့ မိဘတွေနဲ့လည်း တွေ့ချင်သေးတယ်.. သမီးလိုချင်တဲ့ တန်ခိုးရှင်ဆိုတာ ဦးလေးမှာ ရှိမရှိ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင် ” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကလေးမလေးနဲ့အတူ အိမ်ကို လိုက်ပါလာတဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်ဆင်ထားသူဟာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော အထူးကု ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး “ဒေါက်တာ ကာတန်အမ်းစ်ထရောင်း” ဖြစ်ပါတယ်.. ဆေးရုံကြီးမှာ ဒေါက်တာ ကာတန်အမ်းစ်ထရောင်းရဲ့ ဦးဆောင်ခွဲစိတ်မှုတို့ ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ အခကြေးငွေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှာ ထပ်ကုန်စရာ မလိုတော့ဘဲ အင်ဒရူးလေးဟာ မကြာခင်မှာ နေကောင်းကျန်းမာလာပြီး အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. အင်ဒရူလေး နေပြန်ကောင်းလာလို့ သူ့ရဲ့ အဖေအမေနဲ့ တက်စ်လေးတို့ဟာ ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာစွာနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မယုံနိုင်ခြင်းများစွာနဲ့ ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်.. “ သားလေးရဲ့ ခွဲစိတ်မှုဟာ တကယ့်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးဆန်းလွန်းတယ်နော်.. တန်ခိုးရှင်တစ်ပါးပါးက ဖန်ဆင်းပေးလိုက်သလိုပါဘဲရှင်... ကျွန်မဖြင့် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ကုန်ကျတော့မှာဘဲ.. ဘယ်ကနေရှာရမလဲ လို့ စိတ်ပူနေတာ.. ဒီလို တန်ခိုးရှင်လို သနားကြင်နာတတ်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ လောကမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိနေမှာပါလိမ့်။ တကယ်လို့များ အင်ဒရူးအတွက် ခွဲစိတ်ခသာ ပေးရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များ ကျမလဲ မသိဘူးနော်” လို့ မိခင်ဖြစ်သူက ပြောလိုက်တော့ တက်စ်ကလေးက မျက်ဝန်းလေးတွေ ရွှန်းလဲ့တောက်ပသွားအောင် ပြုံးလိုက်ပါတယ်.. အင်ဒရူးလေးရဲ့ ခွဲစိတ်ခ ဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတာ သူမအသိဆုံး မဟုတ်လား.. “ခွဲစိတ်ခအတွက် ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်းဟာ တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဆယ့်တစ်ဆင့်ရယ်.. သူမရဲ့ ဇွဲနဲ့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ယုံကြည်မှုရယ်ဘဲပေါ့။”
John Deru ရဲ့ A miracle of $1.11 ကို နှစ်သက်မိသဖြင့် ဘာသာပြန်ပါသည်။